Fanambaram-pisiana : tsy taitra ny antoko politika raha tsy misy fifidianana | NewsMada
Fanambaram-pisiana : tsy taitra ny antoko politika raha tsy misy fifidianana
Hatramin’izao, tsy hita ny fiovana amin’ny fomba fanaovana politika. Tsy firy amin’ny antoko no manao fanambaram-pisiana, tsy taitra raha tsy misy fifidianana…
Manao fanambaram-pisiana mialoha ny 30 avrily isan-taona ny antoko politika, araka ny voalazan’ny lalàna ny 9 septambra 2011. Amin’ireo antoko politika 187 voasoratra ara-dalàna ary nahavita ny fanambaram-pisiana tamin’ny taon-dasa, nahavita izany ny 30 any ho any.
Tafakatra 350 mahery ny isan’ny antoko politika tamin’ny Tetezamita, talohan’ny taona 2013. Nihena ho 187 tamin’ny taon-dasa. Nampirongatra ny fijoroan’ny antoko ny Tetezamita, niadiana sy nizarana seza. Saika tsy taitra na tsy miasa firy ny ankamaroany, raha tsy ankatoky ny fifidianana.
Fafana ny anaran’izay tsy manao fanambaram-pisiana
Mila manao fanambaram-pisiana isan-taona ny antoko politika. Raha tsy izany, voafafa ao amin’ny Rejisitra nasionalin’ny antoko politika (RNPP) iandraiketan’ny minisiteran’ny Atitany ny anarany sy ny maha antoko politika azy.
Anisan’ny takina koa ny fanambaram-pisiana soniavin’ny filoha nasionalin’ny antoko. Voalaza amin’izany ny foibe toeran’ny antoko ary ny anarana sy ny adiresin’ireo mpikamban’ny birao mpanatanteraka. Eo koa ny tatitry ny asa vita tamin’ny taon-dasa sy dika mitovy amin’ny fankatoavana ny fijoroan’ny antoko.
Tsy mahavita ny asany ny ankamaroan’ny antoko
Tsy miraika firy ny fampahatsiahivan’ny minisiteran’ny Atitany ny amin’ny tokony hanaovana fanambaram-pisiana isan-taona ny ankamaroan’ny antoko: rehefa misy fifidianana vao mikoropaka. Misy aza ny tsy sahy miatrika fifidianana, fa miandry mahazo na “sakaizan’ny mpandresy” fotsiny amin’ny fahazoana seza…
Tsy firy amin’ny antoko, ohatra, no mandray anjara amin’ny fanabeazana olom-pirenena sy fampandrosoana, takin’ny lalàna. Ampiarahana na amin’ny fanambaram-pisiana ny dika ny tatitra momba izany.
Vokany, tsy misy fiovana ny fomba fanaovana politika. Tsy mahavita ny adidiny sy ny asany ny ankamaroan’ny antoko.